Ukuthelekiswa kweentloko ze-TWS | I-Androidsis
Kule posi sikuzisa enye yezona zixhobo zithandwayo kwii-smartphones, ii-headphone. Kwaye sesinye sezona zinto zibalulekileyo esizisebenzisayo xa sikhupha ii-mobiles kukuba sikwazi ukumamela umculo. Kwaye mva nje, enkosi kukonyuka okubonakalayo kubungakanani bescreen, sikwasebenzisa ii-smartphones zethu ukubukela uthotho, iimuvi, ibhola ekhatywayo ...
Ii-headphone zibalulekile kwaye asinakuphila ngaphandle kwazo. Oku kuhambelana ngexesha kunye nesigqibo esingenangqondo esenziwe linani elikhulu labavelisi. Kwaye ayikho enye into ngaphandle kokubakhupha kwizixhobo esizifumana nge-smartphone entsha. Kwaye ngokungazibandakanyi nezinye izixhobo ezigqiba ekubeni zisuse isinxibelelanisi sejack, ii-headphone ezingenazingcingo ziye zaba "kufuneka". Kwaye kule post siza kukunika isaphulelo sokuthenga ezi mveliso Ixabiso elifanelekileyo.
1 Ukuvela kwee-headphone ezingenazingcingo
2 Iindlela ezintathu onokukhetha kuzo kunye nezinto ezininzi ezinokwenzeka
2.1 Olunye uphawu, iimodeli ezintathu: i-TWS Vigorun, i-TWS i7 kunye ne-TWS x9
2.2 I-TWS Vigorun
2.3 I-TWS i7
2.4 IXESHA x9
3 Umenzi ofanayo kunye neempawu ezifanayo
4 Thelekisa iinkcukacha zobugcisa
Ukuvela kwee-headphone ezingenazingcingo
Njengayo yonke into ejikeleze umhlaba we-smartphone, indaleko ihlala ihleli kwaye isantya sayo sikhulu. Ii-headphone zeBluetooth ayonto intsha. Kodwa oku Baye bahlaziya okuninzi malunga nezibonelelo kunye nokuhamba. Iimodeli zokuqala zokufika kwintengiso zazinentambo edibanisa zombini ii-headphone. Kwaye ezinye izilawuli kunye nebhetri ebekwe ngeendlela ezahlukeneyo.
Ezona modeli zanamhlanje zisebenzisa Itekhnoloji ebizwa ngokuba yiNyaniso yeNgcingo engenazingcingo (TWS), ngabokuqala abakhethwe ukubiza le nkampani. Zintloko engenazingcingo ngonxibelelwano lweBluetooth olushiye ngokupheleleyo iintambo. Kodwa zahluke njani ii-headphone zebluetooth kwi-True Wireles?
Kule ngcamango yeefowuni, akusekho ntambo yokuqhagamshela phakathi kweendlela zasekhohlo nezasekunene. Inkqubo ye- Unxibelelwano luzimele ngokupheleleyo kwaye ngaphandle kwamacingo ngokwahlukeneyo. Kwaye nangona ekuqaleni umgangatho wesandi wawungaphantsi kunoko kunikwa zii-headphone ze-bluetooth, eli candelo liphucule kakhulu.
Ngoku Intloko nganye ineebhetri zayo, kwaye ubopha isixhobo ngokwahlukeneyo. Banxibelelana nabanye ukubonelela ngesandi sestereo. Ngaphandle kwamathandabuzo inkqubela esele yenziwe ulawulo luhlala kwi-earbud nganye kulawulo lwevolumu, ukutshintsha iingoma, okanye nokuphendula okanye ukwala iifowuni.
Iindlela ezintathu onokukhetha kuzo kunye nezinto ezininzi ezinokwenzeka
Ayizizo ii-headphone zokuqala ezingenazingcingo zale ndlela esithe sakwazi ukuyivavanya kwi-Androidsis. Inkampani yeAermoo isiqinisekisile ngayo IAermoo B3. Umgangatho olungileyo, ii-headphone ezakhiwe kakuhle esizithandayo ukuzama kwaye ngokuqinisekileyo zibeka ibha ephezulu.
Kodwa namhlanje sigxila kuyo Umenzi Chinese TWS kunye nezinye iindlela ezintathu. Iintloko ezintathu zohlobo olufanayo ukuze sikwazi ukukhetha eyona siyithandayo. Okanye eyona ilungele iimfuno zethu. Ufuna iifowuni ezingenazingcingo? Kule posi siza kukuxelela ukuba zeziphi ezi zindululo zibonakala ngathi.
Ngokomxholo ezi zindululo zintathu ziyafana ngokufanayo. Zonke ziziingcingo ezingenantambo ezingenazingcingo netekhnoloji eyiNene ye-Wireless. Kwaye bobathathu beza Isembozo sayo esisebenza kwitshaja. Nokuba izibonelelo ezinikezelwa nganye nganye ziyafana nezo zabanye. Ke ngoko, ukongeza ekujongeni umahluko abawubonisayo ngokweempawu zobuchwephesha, siya kuthi siqwalasele imeko yomzimba nganye yokhetho.
Olunye uphawu, iimodeli ezintathu: i-TWS Vigorun, i-TWS i7 kunye ne-TWS x9
Masibone nganye nganye kwezi ntloko ngokwahlukeneyo emva koko ukwazi ukubathelekisa kunye nokucacisa ngakumbi ukufana okanye umahluko. Ukuba uzingela ii-headphone ezingenazingcingo, enye yezi ndlela inokukunika umdla, kwaye iya kululungela uhlahlo-lwabiwo mali.
Imodeli yeVigorun mhlawumbi yenye eyona bhokisi / itshaja inkulu kwabathathu. Ngaba yakhiwe ngeplastiki, eyayisezandleni ingabonakali ikumgangatho ophezulu. Ukuvulwa kunye nokuvulwa sesona besikuthanda kancinane kwezi zintathu. Ukuyivala ngokulula kuya kufuneka sicinezele de sive u "cofa". Kodwa ukuyivula, ngaphandle kokwazi kakuhle ukuba ungayithatha njani, kuya kufuneka uyitsale ngenkani kodwa ulumke ungayaphuli.
El umbala omnyama okhazimlayo Ngento egqityiweyo kwangoko, ikuvumela ukuba ubone umkhondo kuyo yonke indawo. Une Isiciko esimnyama esimnyama ekuvumela ukuba ubone ii-headphone ukuze wazi ukuba bayabiza, umzekelo. Kwindawo yayo ephezulu, ngasekhohlo, inayo Ii-LEDs ezine zibonisa, kuxhomekeke kwizibane ezikhanyayo, imeko yentlawulo kwitshaja yetyala.
Kulo icale lasekhohlo thembela kuye ukulayisha izibuko, kule meko imalunga i-USB encinci. Njengazo zonke ezi zixhobo, ebhokisini siza kuyifumana kuphela, ukongeza kwibhokisi kunye neefowuni, intambo ye-USB. Asinayo ikhonkco yokuhlawulisa eludongeni ke siyakufuna iPC, okanye itshaja yethu.
Ibhokisi yetshaja ye-TWS Vigorum inikezela ukuya Imijikelo emithathu yentlawulo epheleleyo kwii-headphone zethu. Kodwa ibhokisi ngokwayo ikhawulezisa ukutshaja, inqaku elihle ekuthandeni. Singayonwabela i-100% yebhetri esebhokisini yayo kwiyure nje eyi-1 kunye nemizuzu engama-50 kwii-headphone.
Ukwengeza, Iifowuni zentloko badibanisa kwaye badityaniswe ngokuzenzekelayo xa sizivula. Bano Uyilo lwe-ergonomic oluqinisekisa ukubanjwa okukhuselekileyo. Singabaleka okanye sikhwele ibhayisekile ngaphandle koloyiko lokuba singaphulukana nazo okanye ziya kuwa.
Ngokuphathelele isandi esisifumanayo Umgangatho wesandi seHD Stereo. Kwaye into engaphezulu ebesingayilindelanga kwaye iyasimangalisa kakuhle. IVigorum Unetekhnoloji yangaphandle yokunciphisa ingxolo. Into ethi, nangona inokuphuculwa, ibuyisele umbane ngamanye amaxesha onqabileyo.
Ukuba uyayithanda imodeli ye-TWS Vigorun Akukho mveliso ifunyenweyo. Kwaye ngoku uyifumene Iipesenti ezingama-25 zisebenzisa ikhuphoni yeVIGORUNA.
Imodeli ye-TWS i7 ibonisa a jonga kakhulu ngokufana kakhulu nemodeli yeVigorum. Izinto ezakhiwe kuyo zifana ngokufanayo. Nangona kwimeko ebonakalayo sifumana ukungafani. Ibhokisi yetshaja nayo ineemilo ezigobileyo kodwa enemigca efanayo macala. Inkqubo ye- ukuvula ibhokisi yahlukile, nge iqhosha ngaphambili kwayo kuya kufuneka sicinezele ukuze isiciko sivulwe. Ngaphandle kwamathandabuzo, le nkqubo ikhululeke ngakumbi.
El umbala ngokulinganayo mnyama mhlophe, ke inengxaki "efanayo" yeminwe. Ibhokisi, kanye ezandleni zakho kubonakala ngathi yomelele ngakumbi kunemodeli yeVigorum. Mhlawumbi usuka kwi- ubungakanani obuncinci, Kwaye ukuba nenkqubo yokuvula amaqhosha, masoyike kancinci ukuba yaphule kwaoko.
Le modeli, kwelinye icala, ayinazo izibane ze-4 ze-LED ezibonisa inqanaba lentlawulo. Kuphela nge isibane esincinci, kwaye kuxhomekeke kwinani le blinks ngomzuzwana, sinako yazi ukuba isebenza njani ibhetri. Inkqubo mhlawumbi inzima okanye enokuba nesisombululo esilula.
Kwibhokisi singene ngqo kwingxaki encinci. Nangona ii-headphone kufanele ukuba zibutsalane ngesiseko sokutshaja ukulungelelanisa ngokuzenzekelayo ukubeka, oku akusebenzi njengoko kufanelekile. Kwaye ukuze iseti yentloko idibane nesiseko, kuye kwafuneka ukuba siyicinezele ngomnwe wethu. Into ngethamsanqa Isonjululwe ngokuvala isiciko, Kwaye bacinezelwe ukuze babekwe ngokugqibeleleyo endaweni yabo.
El isandi kwezi headphone Isitiriyo seHD kwaye umgangatho ekubonelela ngawo ulungile ngenene. I-bass iziva ilungile, kwaye Isandi sipholile kwaye siyinyani. Ukudibanisa ngokuzenzekelayo kwisixhobo naphakathi kweefowuni eziphathwayo kuyakhawuleza kwaye kufanelekile. Enye into ephawulekayo yile ukubamba kakuhle endlebeni engashukumi nokuba senza intshukumo ngonembeza.
Fumana iifowuni Akukho mveliso ifunyenweyo. Kananjalo nge Ikhuphoni HK4RRAF6 uya kuba nesaphulelo esongezelelekileyo sama-25%.
Eyokugqibela kwezi ntloko zentloko sizivavanyayo, ngobuhle ayifani nayiphi na kwezi zingasentla, ubuncinci ngokwebhokisi yetshaja yayo. Ukuqala kwi ukhetho lwezixhobo ezisemgangathweni ezingcono, kunye noyilo olwahluke ngokupheleleyo. Kwaye nge ukutyibilika ifomathi lokuvula eziyinika inkangeleko ebalasele ngakumbi.
Ibhokisi, kunye neefowuni ngokwazo, zibonisa ulwakhiwo kunye nomtsalane ngakumbi. Mhlawumbi ngenxa yokuba izigqubuthelo zeplastiki ezingena gingci kwezinye iimodeli ezimbini zibanika umfanekiso osezantsi. Nkqu ukuchukumisa, kunye nobunzima ukusuka kwi-headphone kunye nebhokisi esetiweyo ibonakala ifanelekile.
El umbala kwi-grey yentsimbi inomtsalane kakhulu, kwaye ngokungafaniyo nezinye iindlela ezimbini, kakhulu isicoci okoko iinyawo azibonakali. Ungayichazanga i- intuthuzelo kunye nokhuseleko ibonelela ngantoni inkqubo yokuvula nokuvala. Ngaphandle kokusebenzisa amandla sinokuvula kwaye sivale ngokulula.
Nangona phantse kuyo yonke into sinokubona le modeli yamva ingcono, I-TWS x9 iyabhanga kwinto ebaluleke kakhulu. Kwicala le umthamo webhetri Zombini ii-headphone kunye netyala letshaja zisendaweni yokugqibela. Umgangatho othintela amanqaku ngokubhekisele kubakhuphisana nabo kwaye oko kunokuthetha ukukhetha enye okanye enye.
Kodwa xa uCesar eyiCesar, iX9 ikude, abo banakho ukubonelela ngezona zixhobo zinamandla. Elinye lamanqaku abuthathaka phantse kuzo zonke ii-headphone zolu hlobo esikwazi ukuzivavanya. Kwaye ukuzisebenzisa esitratweni, ngengxolo yesixeko, iimoto, njl., Umthamo omkhulu wawufutshane. Oku akuyi kwenzeka kuwe nge-x9s.
Ine- Amandla aphezulu ukuba kwii-headphone zebluetooth asiqhelanga kulinga. Kwaye ukuba koku sidibanisa Umgangatho wesandi ocacileyo kwaye ubunzulu, bass ezichazwe kakuhleNgaphandle kwebhetri encinci, abagqatswa baya kuba zezona zilungileyo kwezi zintathu. Ngaba bakweyisile? Akukho mveliso ifunyenweyo. Kwaye ndiyabulela koku ikhowudi yesaphulelo ArbilyY9 ungafumana ama-25% ngexabiso eliphantsi.
Umenzi ofanayo kunye neempawu ezifanayo
Ukuba ujonga iseti yentloko engenazingcingo ehlangabezana neemfuno zakho, naluphi na olu khetho lunokukunceda. Zonke ezi zintathu zibonelela ngokusebenza kakuhle okona kubaluleke kakhulu, icandelo lesandi. Kwaye ziyafana kakhulu enye nenye ngokubhekisele kwinto abanokusinika yona njengabasebenzisi. Ukuhamba okuphezulu, ukuzimela okuhle kunye nokulungiswa okuhle ngoko ke awe.
Nokuba zithini izinto ezincinci ezinje ngobomi bebhetri, okanye uluhlu lomgama ofikelela kwiBluetooth, umahluko omkhulu ufumaneka kwinkangeleko yomzimba yee-headphone kunye nejaja yebhokisi. Ke ngoko, ebusweni bokufana okuninzi, kunokwenzeka ukuba incasa yenye okanye enye yeyona nto isebenza ukuthatha isigqibo.
Ukuphuma kumathandabuzo wena Siqhoboshela itafile kunye neenkcukacha zobugcisa apho sinokuzithelekisa khona. Kwaye ubone ukuba izibonelelo zenye okanye enye zisinceda ukuba sifumane ezona zilungele iimfuno zethu. Yintoni eqinisekileyo kukuba nayiphi na kwezi ndlela zintathu ziya kusebenza ukuze ube namava omsebenzisi aqinisekileyo.
Khumbula ukuba unako Fumana iimveliso ngesaphulelo esongezelelweyo se-25% usebenzisa la makhuphoni kwiAmazon: ArbilyY9 (yeX9) HK4RRAF6 (yeY7) kunye neVIGORUNA (Vigorun)
Thelekisa iinkcukacha zobugcisa
Umzekelo IVigorum i7 x9
Uluhlu lomgama 10 m 15 m 15m
Ubomi bebhetri ngomculo Iiyure ze2.5 Iiyure eziyi-2- 3 Iiyure eziyi-3- 4
Ukuzimela kwincoko Iiyure ze2.5 Iiyure eziyi-2- 3 Iiyure eziyi-3- 4
Ubomi bebhetri kwindawo yokulinda + Iiyure ezili-100 + Iiyure ezili-100 + Iiyure ezili-100
Ibhokisi yebhetri-itshaja 450 mah 800 mah 400 mah
Ibhetri yentloko 50 mah 50 mah 40 mah
Ukumataniswa okuzenzekelayo SI SI SI
Ukucinywa kwengxolo SI Hayi Hayi
Ukuphindaphinda I-20 Hz - 20 KHz I-20 Hz - 20 KHz I-20 Hz - 20 KHz
ICarga i-USB encinci i-USB encinci i-USB encinci
Ulawulo iqhosha chukumisa chukumisa
Amanani 45.99 € 48.99 € 45.99 €
Unxibelelwano lokuthenga Akukho mveliso ifunyenweyo Akukho mveliso ifunyenweyo Akukho mveliso ifunyenweyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » Ukuthelekiswa kweentloko ze-TWS
Yile ndlela izipho eziza kusebenza ngayo kwi-Fortnite